Bucketwheel Dredge Waxaa Lagu Iibiyey Brazil Macdanta Dahabka - Ellicott Dredges
Ellicott® wuxuu iibiyey Bucketwheel Dredge si uu u helo macdanta Dahabka ee Brazil
Ellicott® International waxay ka iibisay boodh boodboodis ah shirkad reer Brazil ah oo loogu talo galay macdanta qodista dahabka ah ee Amazon.
Mineracao Trans Amazonica (MTA) dhigay Ellicott® Brand B890 “Wheel-Dragon ™” oo ku duugan adeeg u dhow Wabiga Paru ee galbeedka magaalada Jari ee agagaarka Monte Dorado, Brazil.
MTA waa xiriir la leh North Brain Mining Corp., Ltd. ee Hong Kong iyo Rio de Janeiro. Rakibkan ayaa calaamad u ah arjiga koowaad ee 'Ellicott'® qodaal laba jibbaarada qodista dahabka.
Qulqulka duulista ayaa loo duuliyay salka Amazon ee xayndaabka hawdka diyaaradda Hercules. MTA ayaa cadeysay ku habboonaanta la qaadan karo ee loo yaqaan 'B890 dredge' oo loogu talagalay diyaarinta xamuulka dabacsan oo ah mid ka mid ah sababaha loo xusho Ellicott® International.
Faahfaahinta Ellicott-ka® Brand B890 “Wheel-Dragon ™ waxaa ku jira mashiinka laba-giraanta ee DWE94 qoda (150hp), Caterpillar 3412 matoor weyn iyo 3306 mashiin caawiya. Qodku wuxuu qodan karaa ilaa 26 fuudh oo qoto dheer wuxuuna dhex mari karaa ilaa 40,000 fuud oo dhuumaha isticmaalaya 14-inch, 665 hp Ellicott® bamka sumadda.
Tani waxay ahayd Ellicott labaad® nooca loo yaqaan 'dredge brand' ee hawada loo soo diray Latin America. Kiiskii hore wuxuu ahaa gaarsiinta hawada Occidental Petroleum ee Taxanaha 1870 ee aagga saliidda Cano Limon ee Colombia.
Ellicott® sumadda "Wheel-Dragon ™" khadka wuxuu u dhexeeyaa 30 hp illaa 1500 hp wuxuuna adeegsan karaa nidaamyada bamgareynta min 4 inji ilaa 40 inji. Qashin qubka baaldiga ee shirkadda iyo taxaneheeda "Wheel-Dragon ™" ayaa si gaar ah ugu guuleysta warshadaha macdanta.